13 Zvikonzero Zvikuru Nei Varume Vachibvisa (+ Zvaunogona Kuita Kuti Ubatsire) - Ukama
13 Zvikonzero Zvikuru Nei Varume Vachibvisa (+ Zvaunogona Kuita Kuti Ubatsire)
Murume wako arikudhonza achienda kure newe.
Ari kubuda maari.
Unosara uchishamisika kuti sei…
Akanga ari kuita kufarira.
Muchokwadi, une chokwadi chekuti anokuda kupfuura zvaari kurega.
Saka nei achiitira kure kamwe kamwe?
Sei, mushure mekuswedera padhuze newe, ave kudzokera kumashure?
Ndo zvatinotarisira kupindura muchinyorwa chino.
Tichaongorora zvakare zvaunogona kuita kana izvi zvikaitika uye maitiro ekuita kana / kana adzoka kwauri.
Kutanga, zvakakosha kuti uzive kuti havazi vese varume vanoita izvi. Uye vamwe vakadzi vanoita nenzira iyi futi.
Uye hazviitike chete mumatanho ekutanga ehukama - vakomana dzimwe nguva vanokwevera kure kwenguva kunyange mukati hukama hwakazvipira .
Saka ngationgororei zvimwe zvezvikonzero nei varume vachibvisa kune mumwe wavo.
13 Zvikonzero Nei Varume Vachibvisa
Zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Iwe urikuswedera padhuze nemurume uye anoita kunge ari kudzorera.
Ndezvipi zvinoshanduka mupfungwa dzake zvekuti akangoerekana amuendesa kure newe neukama?
1. Ari kutya manzwiro ake.
Zvichida chikonzero chikuru nei varume vachidhonza kutanga muhukama nekuti ivo vanotya manzwiro avanoita.
Kunyangwe kana kwete ivo vanga vachitsvaga kutsvaga rudo pawakasangana navo, iko kunzwa kwekuerekana kuwira kune mumwe munhu kwakazara kusava nechokwadi.
Vamwe varume vanongoona izvi zvakaoma kuita.
Varume ava havasi sekubata nemanzwiro avo sezvingaitwa nevamwe, uye vasina kufananidzwa nevakadzi vazhinji futi.
Ivo vanogona kuwana kufunga kwehukama kuchikwezva kwazvo, asi manzwiro anouya nawo akaoma kwavari kuti vatore misoro yavo kutenderedza.
Saka ivo vanotora imwe nguva kuenda kunoshanda kuburikidza nemanzwiro aya.
Chete, pamwe havataure izvi kwauri. Ivo vanongova vanonyanya kunetsekana mumuviri uye nemupfungwa.
2. Ndiye kutya kuzvipira .
Vamwe varume vanowana pfungwa ye kugara wakavimbika kumunhu mumwechete zvekune dzimwe nyika.
Pamwe ivo vachiri vadiki uye vanoda 'kutamba munda' vasati vagadzikana.
Pamwe vanonakidzwa nekutanga kwekutanga kwehukama hwekudanana uye 'kudzingirira' kwechido cherudo, asi kwete izvo zvinouya mushure.
Murume anogona kunge asina kumbobvira ave nehukama hwakareba kwenguva refu uye haazive kuti zvinorevei - saka anongodhonza ozvitadzisa kusvika padanho irori.
Kurerwa kwake kunogona zvakare kuve nebasa rekutamba, kunyanya kana vabereki vake vakaparadzaniswa panguva yehudiki hwake.
3. Ari kunamatira kurusununguko rwake.
Hukama hunoda kuzvipira, nguva, uye kushanda nesimba. Zviri pachena kuti zvinokutorera kure nezvimwe zvezvinhu zvaunofarira parizvino.
Kune vamwe varume, maitiro aya maviri kuva mumwe (nenzira yekufananidzira, zvirinani) anomiririra kurasikirwa nerusununguko uye rusununguko.
Uye kana munhu achinyanya kukoshesa zvinhu izvi, anogona kubva achida kunamatira pazviri.
kupomerwa kubiridzira kana usina mhosva
Izvi zvinonyanya kuitika kune vakomana vanga vasiri kushingairira kutsvaga hukama pavakasangana newe.
Chokwadi, vanogona kunakidzwa nenguva yavanopedza newe, asi vanogona zvakare kushuvira nguva dzavanogona kuita zvavanoda, pavanenge vachida.
Vanogona kusuduruka voshandisa nguva yakawanda vega kuti vaone izvo zvinokosheswa nemwoyo wavo zvakanyanya.
4. Anotya kukuvara.
Hukama hwekare hunogona kusiya mavanga epamoyo uye mukwende izvo zvinokonzeresa kuti murume azvigure asati aisa moyo wake nenjodzi yekuwedzera kukuvara.
Kana akambove nemumwe wake waakarambana naye paakanga achidanana navo, zvinogona kumuita kuti atye kusangana nemarwadzo akafanana zvakare.
Izvi hazvisi kungoitirwa chete kuvarume. Vakadzi vazhinji vanogona kunzwa nenzira iyi futi.
Mune ino kesi, kudhonza kure imwe nzira yekudzivirira yakagadzirirwa kuzvidzivirira.
Ngatizvitarisei, pavanenge vari kudanana , munhu anogona kuita zvese zvisinganzwisisike. Dzimwe nguva izvi zvinoratidzira sekuzviparadza wega.
Hazvireve kuti haana manzwiro kwauri, asi zvinoreva kuti haazive maitiro ekuita pane iwo manzwiro.
5. Zvese zvakamunetsa zvakanyanya.
Humwe hukama hunobva kubva zero kusvika makumi matanhatu nekukurumidza zvakanyanya.
Zvakawanda sezvaanogona kuda izvozvo mumota dzake, anogona kunge asinganyanye kuzvifarira kana zvasvika pakudanana.
Manzwiro ari pakati pako uye mashandisiro aunoita nguva yakawanda pamwe chete anogona kunge ari akati wandei nekukurumidza.
Iyo hukama hunogona kunge huri kufamba nekukurumidza zvake.
Saka iye anodzosera kumashure otora zvishoma senzira yake yekuisa mabhureki pazvinhu.
Anogona kungova akasununguka kutora zvinhu zvishoma nezvishoma.
6. Anoda kuita recharge huhurume hwake.
Hukama hunoshandura vanhu kusvika pamwero wakati. Muchiitiko chemurume, zvinowanzovaita vanotambura zvakanyanya uye zvakanyanya kuratidza mweya (asi zvisingawanzo nguva dzose).
Izvi zvinogona kunzwa zvisina kujairika kuvarume vazhinji uye maitiro avo echisikigo anogona kunge ari ekurwisa.
Vanogona kunzwa kudiwa kwekudhonza kuitira kuti vadzore zvavo 'murume bhatiri' vachiita mhando yezvinhu zvinonakidzwa nevarume.
Vanogona kudzokera kunzvimbo yekunyaradza uye masimba - zvese chaizvo uye nenzira yekufananidzira.
Iyi nzvimbo inowanzo kunzi se 'murume bako' uko varume vanoita zvinhu zvevarume, kazhinji nevamwe varume.
Mumatanho ekutanga ehukama, izvi zvinogona kureva kuti anoshandisa yakawanda nguva panzvimbo yake pasina iwe.
sei kubuda muhukama hwakareba
Kana iye anogona kushevedza shamwari dzake dzechirume kuti vazvipinze mune dzimwe nzira dzinotungamirwa nevanhurume dzakadai semitambo, mitambo yemavhidhiyo, kana kunwa doro kana maviri.
Iyo yekupedzisira yakajairika muhukama hwakagadzika apo vaviri vanogara pamwe chete uye murume haana nzvimbo yakaparadzana yekudaidza yake.
Zvisinei, nguva ino kure nemukadzi muhupenyu hwake inomutendera kuti abatanezve nechikamu chekuzivikanwa kwake uko kungave 'kuneteswa' nehukama.
7. Ane zvimwe zvinonetsa muhupenyu hwake.
Kana mukomana achidhonza, dzimwe nguva hazvina chekuita newe kana hukama.
Anokwevera kure nekuti ane kushushikana kwakawanda mune dzimwe nzvimbo dzehupenyu hwake.
Pamwe mukuru wake ari kukumbira zvakawanda kwaari uye, achive iye anoda chinzvimbo iye ari, haadi kuvarega.
Kana kuti pamwe arikunetsana nemhuri yake uye izvi zviri kutora kushungurudzika.
Anogona kunge akatarisana nenyaya dzehutano dzausingazive.
Uye pane mukana wekuti ave nekunetseka kwemari.
Kana hukama hwacho huchiri mumatanho ekutanga, anogona kusanzwa achikwanisa kana kuda kukuudza.
Anogona kunetseka kuti zvinhu izvi zvinongokuvhundusa kana kukuita kuti ufunge nezve tarisiro yenguva refu yehukama.
Saka anovahwandira uye anozvifambisa zvishoma kuti arege kuzviziva.
8. Anonzwa iye haikodzeri rudo uye mufaro.
Vamwe vanhu vanozvitutumadza uye vanozvikoshesa zvekuti havanganzwisise kuti sei munhu achivada.
Zvichida mukomana wako mumwe wevanhu vakadaro.
Angave achidhonza nekuti ane chokwadi chekuti haumude uye kuti haakodzere mufaro waanganzwa kana anemi.
Anogona kutakura mavanga epamoyo kana mukwende izvo zvaasingaone zvakapfuura maererano nehukama hwenyu neramangwana pamwechete.
Muchokwadi, zvakanyanya kukura zvinhu zvinopinda pakati pako, ndipo paanotanga kuzvipokana iye seakakodzera mudiwa uye mudiwa. Kana akatanga kubvisa nguva pfupi mushure mekunge iwe wajekesa manzwiro ako kwaari, ichi chingave chikonzero.
9. Ari kunetsekana nekurasa zita rake.
Usati wauya, aive (anofungidzirwa) asina kuroorwa kwechinguva chidiki, uye pamwe kwenguva yakareba.
Munguva yemazuva ake asina kuroorwa, akatanga kuzivikanwa akatenderedza hukama hwehukama.
Kunyangwe kana iye ainakidzwa chaizvo nekuve asina kuroora, akazvizivisa nazvo uye akaziva mararamiro ehupenyu hwake semunhu iyeye. Aive nemaitiro uye zvekutandarira nevanhu vaaimboona nguva dzese.
Iye zvino zvauri pachiitiko uye haasisina kuroora (kana kuti tarisiro iri kuwedzera yakakura sezvo zvinhu zvinowedzera), anogona kunge achienda muhupenyu uye munhu waaimbove nekuti anonetseka kuti anofanira kusiya. zvimwe zvinhu izvo zvaasingade kusiya.
Zvichida hupenyu hwake hwekare anonzwa kugadzikana uye kujairira zvekuti ari kunetseka nekurasikirwa neizvozvo.
10. Ari kuvhiringidza ruchiva rwerudo… uye rwuri kupera.
Kana iwe wakave uine mukomana uyu kwechinguva chidiki uye iye achingove iye zvino atanga kubuda kubva kwauri, zvinogona kudaro kuti hukama hwakasimba hwepanyama hwaanonzwa newe hwave kutanga kupera.
Icho chikamu chekufambira mberi kwehukama, asi zvinogona kuvhiringidza kana iwe usingazive zvazvinonyatso kureva.
Angave akakanganisa kuchiva kwerudo. Uye zvino ruchiva parwunopera zvishoma nezvishoma, asi zvirokwazvo, akazvishingisa kuti hauna kukodzera mumwe nemumwe nekuti rudo harusati rwanyatso kukura kutora nzvimbo yeruchiva.
Akabatwa mungano yekuti iwe unofanirwa kunzwa manzwiro akasimba kune mumwe munhu nguva dzese kana uchizoshanda sevaroorani, apo chokwadi chiri chekuti manzwiro anopera uye kuyerera nguva dzese muhukama hunofadza uye hwakazvipira.
11. Akangobatikana zvakanyanya.
Zvakanaka, saka ungati kana ainyatsokuitira hanya, aizoita nguva, asi hupenyu hausi nyore nguva dzose.
Kana aine yakawanda yakawanda yekuzvipira kwenguva iyo yaasingadi kana kugona kudonhedza, anogona kusanzwa kugona kukodzera hukama newe mumusanganiswa.
Iye anobvisa zvinogona kunge zvisiri nekuda kwaanoda, asi nekuda kwekuti haakwanise kuchengeta kutaurirana kwedhijitari uye kwemuviri newe.
Kana iye ari kushanda mabasa maviri, achigovana kuchengetwa kwevana newawakamboshanda naye, uye achibatsira kutarisira hama yechikuru, anogona kungopera simba.
Inogona kunge iri nyaya yemunhu chaiye, isiriyo nguva… zvinosuruvarisa.
12. Ari kutsvaga dzimwe sarudzo.
Kana usati wabvumirana kuve vaviri vakasarudzika, anogona kunzwa sekufambidzana nevamwe vanhu zvichakanaka.
sei ndichinzwa sekuti handisi wepano
Uye, zvisingadzivisike, kana ari kupedza nguva aine vamwe vanhu, ari kushandisa nguva shoma newe.
Haisi chete nguva yekuzvipira uko iwe paunogona kuona mutsauko, asiwo padivi remanzwiro futi. Kana ari kuongorora manzwiro ake kune vamwe, anogona kudhonza zvishoma kubva kwauri mune zvepfungwa.
13. Haasi sezvauri sezvawaifunga.
Ichi chingangove chikonzero chingangodaro muhukama izvo zviri zvitsva zvitsva, asi anogona kunge asiri kungofarira sezvaunofunga.
Izvo zvinogona kuve zvakaoma kunzwa, asi varume vazhinji havana kunaka kana zvasvika pakutaurirana kwavo kwechokwadi manzwiro panguva yekufambidzana.
Saka pane kutaura newe uye kujekesa kuti havadi kuteedzera zvinhu kumberi, ivo vanongozviswededza ivo netariro yekuti iwe uchazosvika pamhedziso iyi wega.
Iyo inoyamwa, asi iwe pamwe wakambove nerombo rakanaka kutiza kana izvi zviri izvo.
Zvaunofanira Kuita Kana Murume Achibvisa Kure
Zvinogona kunzwa zvinotyisa kana murume achizvipinza maari, sekurambwa kwemhando.
Iwe unogona kushamisika kana ari kukuedza, asi izvo zvinenge zvisiri izvo.
Ari kungoshanda kuburikidza nepfungwa dzake uye nemanzwiro.
Saka, ndeipi nzira yakanakisa yekutaura aya mamiriro?
Wana maonero ehunyanzvi
Kunyangwe ichi chinyorwa chingakubatsire kuona kuti nei murume wako ari kubvisa uye kupa mamwe mazano ekuti ungaita sei nazvo, zvako nemamiriro ake ezvinhu zvakasiyana.
Kazhinji iri zano rakanaka kuwana zano chairo zvichibva pane zviri kunyatsoitika muhukama hwako. Uye kune izvo, iwe ungangodaro uchida kutaura kune wehukama nyanzvi (ingangoita wega mumamiriro ezvinhu aya).
Asi iwe unogona kuenda kupi kuti utaure kune mumwe munhu? Zvakanaka, zvikamu zvepamhepo zvinopihwa nesarudzo yakanaka kune vakawanda. Unogona kutaura pamhepo kana kuburikidza nefoni kune nyanzvi mune izvi zvinhu vanogona kukuteerera uye nekupa nzira chaidzo dzekuyedza.
Dzimwe nguva, kungotaura kune mumwe munhu kunogona kuratidza nzira dzekuti uenderere mberi nekubata maitiro emurume wako ekuhwanda. kutaura kune mumwe munhu izvozvi.
Kutendeseka… unofanirwa kumupa nzvimbo .
Hapana chimwe chezvikonzero zviri pamusoro chinogadziriswa newe iwe uchizama kumudzosa kumashure uye uchimanikidza kuti mupedze nguva yakawanda muri pamwe chete.
Ari kudhonza kuenda nekuti ndizvo zvinonzwa zvakanaka panguva ino chaiyo munguva.
Anogona kunge asiri kunyatsoziva kuti sei, asi kurwisa hunhu uhwu kune njodzi yekukonana kunogona kuita kuti zvinhu zvinyanye uye kungangodaro kusiri kudikanwa.
Space, hongu. Kunyarara, kwete.
Kumupa nzvimbo hazvireve kuti iwe unofanirwa kumisa nzira dzese dzekutaurirana zvachose.
Hazvireve kana kusamuona.
Zvinoreva kuva neruremekedzo zvekuda kwake kuve ari kure newe.
Unofanira kumutumira mameseji here? Chokwadi, iro harisi dambudziko.
Pfungwa dzake dzinogona kunge dzakazara nemifungo uye kusava nechokwadi, asi angangove achizvifarira kana iwe uchimutarisa nguva nenguva.
Ingo ziva kuti anogona kunge asiri kunyanyisa kutaura kana kupindura nekukurumidza zvakanyanya sepakutanga.
Sezvo zvakaoma sezvazvinogona kana iwe uchinyatsomuda paari, iwe unofanirwa kuremekedza kuti vanhu vanogadzirisa zvinhu nenzira dzakasiyana.
Uye varume vanowanzo kugadzirisa pfungwa dzavo nemanzwiro avo neimwe nzira kune vakadzi.
Nezvekuona mumwe nemumwe, iwe unogona kuramba uchikurudzira kusangana, asi uzvimise nenzira yekuita kuti inzwike ichichinjika.
Iti, 'Kana wakasununguka manheru mamwe vhiki rino, tinofanirwa…'
Izvi zvinomupa mukana wekusarudza zuva rinomukodzera zvakanyanya pane kuti unzwe uchimanikidzwa kuita rimwe zuva.
mwana wemubhegi ane makore mangani
Uye edza kuzviita chimwe chinhu chaunofunga kuti anganzwa akasununguka nacho. Zvichida haana kugadzirira kutaura pamusoro pezvinhu pakureba kukuru, asi munogona kubata firimu kana chiratidziro pamwechete.
Izvi zvinomuchengetedza ari padyo uye zvinomuyeuchidza kuti iwe une hanya pasina kuisa chero zvakakura zvinodiwa kwaari kuti ave ari panjodzi.
Kana kana mave muchipedza mavhiki mazhinji pamwe chete, unogona kugara uchiti une zvirongwa zveimwe remazuva, asi ungade kumuona kune rimwe… zvakare, kana akasununguka.
Izvi zvinotora kusimba pasi notch uchimuvimbisa imwe yevhiki yake kuti aite chero chaanoda.
Unogona kusara uchinzwa kugumbuka kana mwoyo paanosuduruka, asi edza kuenderana nemaitiro aunomuita.
Izvi hazvizove nyore. Manzwiro ako anoshanda seakewo.
Asi kana uchikwanisa, edza kuzviisa mushangu yake kwechipiri.
Kana iwe ukavhiringidzika nemanzwiro ako, kutya kutya kurambwa, kana kuwana zvakaoma kuchinja kubva kune imwe nzira yekurarama uchienda pane imwe, haungade here kubatwa netsitsi?
Hazvisi zvekukura kana kuti rine basa rekuchengetedza hukama hwaenda…
… Asi kana iwe uchimufarira uye uchifunga kuti ari kungobvunda, hazvingakuvadze kugara wakanaka, ane moyo munyoro, uye nehunhu kwaari.
Kana iwe ukapindura kubvisa kwake nekuve kure, zvakare, zvinongogona kuita kuti zvinhu zviwedzere.
Iwe unofanirwa kumuratidza kuti, chero matambudziko emukati aangave achive nawo, iwe uripo kuti umutsigire.
Kana iwe uchikwanisa kuita izvi, anogona kungovhura kwauri zvishoma zvishoma nezve izvo zvaari kufunga uye nemanzwiro.
Chengetai muri vaviri chete.
Kana iwe wanga uchingomuona iye kwenguva pfupi, iri kumanikidza kwakawanda kwaari kuti upedze nguva uine shamwari dzako kana mhuri.
Uye zvakafanana zvinoenda iwe kushandisa nguva naye pamwe neshamwari dzake kana mhuri.
Yese 'kusangana uye kukwazisa' ibasa hombe. Zvinoita kuti zvinhu zvinzwe zvakanyanya kureba uye zvakakomba.
Unogona kunge wakagadzirira izvo, asi anogona kunge asiri iye.
Saka bvisa kumanikidza. Chengetai zvinhu imi vaviri chete kana muchikwanisa. Anozonzwa akasununguka uye achizokwanisa kuzorora mukambani yako.
Izvi ndizvo zvaunoda. Kana achinzwa akasununguka, kashoma kuti anzwe kudiwa kwekusuduruka.
Iyo nguva yekuve chikamu cheumwe neumwe hupenyu hwakazara ichauya. Ingo usaedza kumanikidza nyaya nekukurumidza.
Ratidza rutsigiro rwako rwezvimwe zvishuwo zvake.
Takataura pamusoro pekutya kwemurume wako kurasikirwa nekuzvimiririra uye chikamu cheizvi chinouya kune zvimwe zvinhu zvaanofarira muhupenyu.
Pamwe ari kufambiswa nebasa kana kuti ari kutanga rake bhizinesi.
Pamwe anotora marathon yake achimhanya zvakanyanya uye akazvipira kuhutongi hwake hutongi.
Kana iye anongoda kuenda kunzvimbo dziri kure dzepasirese pasina ganhuriro?
Kana iwe uchikwanisa kumunyengetedza kuti hausi kuyedza kumutorera zvinhu izvi, haazove nechikonzero chekubvisa nekuda kwayo.
Ita nguva yekumubvunza nezvezvido zvake uye kuti zviri kufamba sei. Edza kunzwisisa kuti ndeipi nguva yekuzvipira kwaanotova uye kuve nekuremekedza idzodzi.
Iva netariro nezvezvaari kuda kuzadzikisa uye zvijekese kuti iwe unoda maitiro ake akajeka zvibodzwa uye zviroto uye kuti iwe unonyatsoda kumuona achibudirira
Kana murume achikwevera kure, edza kusafungisisa nezvezvikonzero nei kana kumuroverera zvakanyanya.
Iwe uri mukadzi anokosheswa uye hapana murume anotsanangura zvauri.
Saka gara wakabatikana neshamwari dzako, mhuri, kana zvinokuvaraidza uye ufare zvakanyanya sezvaunogona.
Rangarira, iwe uchiri kugona kutaura naye, uye kumuudza kuti iwe une yakazara diary kunosimbisa kwaari kuti iwe unokoshesa rusununguko rwako zvakare.
inogona yeanopass ibwe rinotonhora
Kana murume achigona kuona hukama hweramangwana apo munhu wega wega achichengeta shamwari dzake uye zvavanofarira, zvichagadzirisa zvimwe zvezvinomunetsa.
Ndinofanira Kuita Sei Paanodzoka?
Kana murume aine manzwiro kwauri uye achikuda muhupenyu hwake, anodzoka kwauri pakupedzisira.
Kunyangwe iwe uchinge wamuona, kumutumira mameseji, kana kutaura naye panguva iyi, ichauya nguva iyo yaanodzoka pamoyo pamwe nepanyama.
Panguva ino, chii chaunofanira kuita?
Unofanira kuita sei?
Zvakanaka, usaende wakananga kumibvunzo iri pachena yakadai sekuti sei akabuda, zvaari kuda iye zvino zvaakadzoka, uye ari kuzozviita futi.
Angave asina chokwadi chekuti sei akanzwa kuda kusimuka, saka kuyedza kumuita kuti azviise mumazwi kunoguma nenjodzi.
Edza kumuratidza kuti unofara sei kuva naye zvakare. Iva ane rudo uye nehanya.
Muudze kuti unoonga sei kuva naye muhupenyu hwako zvakare.
Ita zvaungade kuve muhukama: kufara uye kugutsikana uye kufara.
Usaedze kumuita kuti abhadhare nzira yaakakuitira nayo.
Hongu, taura manzwiro awakaita, asi chengetedza iyo isina kwayakarerekera kana yakanaka pese pazvinogoneka.
Taura chimwe chinhu senge:
Ndinoziva iwe waida nzvimbo nenguva yekuita zvako wega uye kugadzirisa pfungwa dzako nemanzwiro ako. Izvo zvakanaka. Ini handidi kunzwisisa, asi kana iwe uchida kutaura nezvazvo izvozvi kana mune ramangwana saka ini ndinogara ndakagadzirira kuteerera.
Ndakakusuwa. Zvinorwadza kusakuona kakawanda, asi ndiri kurevesa nezvehukama uhu kana uripo.
Ehezve, kana iwe uri muhukama hwakareba uye murume wako achizvibvisa nguva zhinji, pamwe haufanire kutaura chero chinhu zvachose.
Ingoziva kuti ichi hachisi chinhu chisina kujairika chikamu chehukama uye vhura uye ugamuchire kana mumwe wako achidzoka kwauri pamoyo.
Kana murume achizvifambisa, achange 'aenda' kwenguva yakareba sei?
Zvinogona kuve mazuva mashoma kana vhiki. Inogona kuva yakareba.
Mubvunzo chaiwo waunofanira kuzvibvunza ndewekuti wakagadzirira kumirira kwenguva yakareba sei.
Kana hukama hwenyu huri mudiki, mungasave makagadzirira kutenderedza uye chengetai musuwo wakavhurika kwenguva refu.
Asi kana iwe uri chinhambwe muhukama, iwe ungasarudza kumupa iye yakawanda nguva yekurwira nemanzwiro ake.
Izvo zvakakwana kwauri.
Varume Vese Vakafanana Neizvi Here?
Mhinduro ipfupi ndeiyi: kwete, havazi vese varume vanonzwa kudiwa kwekubvisa pamoyo kana panyama kubva kune mumwe wavo.
Kunyangwe ingori nzira iyo varume vane wired, isu tinogona kusamboziva.
Kana vabvisa, zvinogona kunetsa kutora, asi ndinovimba chinyorwa ichi chakakupa rairo rinoshanda rekutevera uye nekubatsira kunzwisisa kwako kwemamiriro ezvinhu aunotarisana nawo.
Ndichiri kusava nechokwadi chekuita nezvehunhu hwekurega murume uyu?Mumamiriro ezvinhu senge izvi, zvinogona kubatsira chaizvo kuwana rimwe-kune-rimwe zano kubva kune mumwe munhu akadzidziswa kubata navo, pane kusanganisa kuburikidza naro chete. Ivo vachateerera kune zvaunofanira kutaura uye vape mazano ekuti ungaite sei.Saka wadii kutaura online kune hukama hukama kubva kuRelationship Hero kuti ikubatsire kuona zvinhu. Simply.
9 Signs Mukomana Anokuda Iwe Asi Anotya Kuzvibvuma
Zvinotora Nguva Yakareba Sei Kudonha Murudo?
20 Hukama Deal Anotyora Izvo Hazvifanirwe Kukwira Kune Nhaurirano
8 Zviratidzo Zvauri Kutorwa Kuti Uzvipiwe Muhukama Hwako
Honeymoon Phase Inotora Nguva Yakareba Sei?
maitiro ekukurira wako wekubiridzira ex
handina kana basa ripi zvaro
renee mudiki uye dean ambrose
kutonhora kwebwe vs shawn michaels
sei kusava mukadzi anoshaya muhukama